RFOX Media | HOME
RFOX Media ဟာ RFOX မှတစ်ဆင့် စွန့်ဦးဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူတွေဟာ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကို အသုံးချပြီး စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးမှုတွေကတစ်ဆင့် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
RFOX TV ဟာ content producer ၊ brand တွေနဲ့ အသုံးပြုသူတွေကို ဖန်တီးနိုင်သလောက် ဝင်ငွေရှာဖွေပေးနိုင်မယ့် ecosystem တစ်ခုထဲမှာ ပေါင်းစည်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
RFOX TV မှာ ကြည့်ရှုပါ
ဒီနေရာမှာ RedFOX ရဲ့ PLAY. CREATE. EARN က ဘယ်လိုမျိုး အလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာကို အပြည့်အစုံသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ RFOX Academy ဟာ ecosystem အနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပြီး သင့်ကို ဘယ်လိုမျိုး ပါဝင်ပြီး ဝင်ငွေရှာဖွေရမလဲဆိုတာကို ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
VFOX ဟာ RFOX VALT ecosystem ထဲမှာရှိတဲ့ ဆုကြေး reward ကို အခြေခံထားတဲ့ တိုကင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ VFOX ကို ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ RFOX ကို အခြေခံထားတဲ့ ဆုကြေး reward တွေကို ရရှိမှာဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်အတွက် official channel တွေကို follow ပြုလုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
RFOX VALT ဟာ အသုံးပြုသူတွေအကုန်လုံးကို Central Platform တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ Ecosystem ထဲက RFOX Venture တွေမှာရရှိနိုင်တဲ့ Product တွေနဲ့ Service တွေအကုန်ဆုံးဆီက ဆုကြေးတွေအပြင် Benefit တွေကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ RFOX Venture တွေကို ယခုနေရာမှာ ထပ်မံလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
RFOX Games ဟာ လက်ရှိနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကို အသုံးပြုထားတဲ့ tournament ပုံစံ ဂိမ်းတွေကိုထုတ်ပေးထားတဲ့ ecosystem တစ်ခုကို ဖန်တီးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အရှေ့တောင်အာရှစျေးကွက်ကို အထူးအာရုံစိုက်ထားပြီး mobile gaming စျေးကွက်မှာ ဆော့ကစားပြီး ဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့ PLAY TO EARN စနစ်ကို အလေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။